အဆိုပါသံအဆုတ်သို့မဟုတ် respiration ၏သမိုင်း
အဆိုပါသံအဆုတ်၏သမိုင်း - respiration
အဓိပ်ပါယျအသုံးပြုပုံသံအဆုတ် "ဦးခေါင်း မှလွဲ. ကိုယ်ခန္ဓာ၏အားလုံး encloses နှင့်ရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်လေထုဖိအားစညျးမဉျြးစညျးကမျးအပြောင်းအလဲများမှတဆင့် exhale မှအဆုတ်တွန်းအားပေးတစ်ခုလုံသတ္တုအကြံပေးအဖွဲ့။ " ဖြစ်ပါတယ်
ဗြိတိသျှသံအဆုတ်၏သမိုင်း၏ရောဘတ်ခန်းမစာရေးသူအဆိုအရအသက်ရှူ၏ mechanics ရဲ့တန်ဖိုးထားဖို့ပထမဦးဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်ယောဟနျသ Mayow ဖြစ်ခဲ့သည်။
1670 ပြည့်နှစ်တွင်ဂျွန် Mayow လေထုဟာ thoracic လိုင်တိုးချဲ့ခြင်းဖြင့်အဆုတ်သို့ရေးဆွဲကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။
သူကတစ်ဦးဆီးအိမ်ဖြည့်စွက်ခဲ့သည့်အထဲမှာဖိုသုံးပြီးမော်ဒယ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဖိုတိုးချဲ့ဆီးအိမ်ဖြည့်ဖို့လေစေသောနှင့်ဆီးအိမ်ကနေလေထုနှင်ထုတ်ခံရသည့်ဖိုချုံ့။ ဒါကသံအဆုတ်နှင့်အခြားအသက်ရှူများ၏တီထွင်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့ "ပြင်ပအနုတ်လက္ခဏာဖိအားလေဝင်လေထွက်" သို့မဟုတ် ENPV ကိုခေါ်အတုအသက်ရှူ၏နိယာမဖြစ်ခဲ့သည်။
သံအဆုတ် respiration - ဖိလိပ္ပုသည်သောက်
ကို "သံအဆုတ်" 1927 အဆိုပါတီထွင်သူထဲမှာဟားဗတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနပညာရှင်များကဖိလိပ္ပုသည်သောက်နဲ့ Louis Agassiz Shaw ကတီထွင်ခဲ့သည်ချစ်စနိုးပထမခေတ်သစ်နှင့်လက်တွေ့အသက်ရှူကိရိယာတခုသံသေတ္တာနှစ်ခုအသုံးပြုသော လေဟာနယ်သန့်ရှင်းရေး ဟာသူတို့ရဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံအသက်ရှူကိရိယာတည်ဆောက်ရန်။ နီးပါးတစ်ဦး subcompact ကားရဲ့အလျား, သံအဆုတ်ရင်ဘတ်ပေါ် push-ဆွဲရွေ့လျားမှုကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။
1927 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးသံအဆုတ်နယူးယောက်စီးတီးရှိ Bellevue ဆေးရုံတွင်တပ်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ သံအဆုတ်၏ပထမဦးဆုံးလူနာရင်ဘတ်သွက်ချာပါဒနှင့်အတူပိုလီယိုခံစားနေရသူခဲ့ကြသည်။
စက်မှုချိန်သီး clock နှင့် Quartz clock ၏သမိုင်း
အဆိုပါ Snowmaking စက်တီထွင်ဘယ်သူနည်း
အဆိုပါ Steamboat Clermont
ထောက်ခံချက်ပေးစာ3အမျိုးအစားများ
ကမျြးစာကိုကောင်းကင်တမန်: သခင်ဘုရားနိုး Up ကိုဧလိယက၏အိန်ဂျယ်
ဘယ်လို Air ကိုစားသုံးမှုစနစ်အလုပ်လုပ်
ဓာတုဗေဒအတွက် Chiral Center ကအဓိပ္ပာယ်
School တွင်နေ့လယ်စာ: ဘယ်လိုကလေးတွေကအဘို့ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုစားသောက်ဆိုင်စားနပ်ရိက္ခာ သာ. ကောင်း၏ Make နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်
10 bargain ဥပဒေကျောင်းများ
မရှိမဖြစ်တူးဖော်ရေး & နည်းပညာ: Linebackers နည်းပြလုပ်နည်း
သင့်ရဲ့ကားသို့မဟုတ် Truck ကားပေါ်တွင် Struts အစားထိုးလုပ်နည်း
အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များစင်ဒရဲလား Fairy Tales များအတွက်
တစ်ဦးကို Microsoft အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရွေးချယ်ခြင်း
သင့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးတစ်ခုထားပါလိမ့်မည်ဒါက 8 Awesome ကိုနှုတ်ခမ်း Dubs
Libra အတွက်အင်္ဂါဂြိုဟ် - သင်၏အင်္ဂါဂြိုဟ် Libra
မင်းသားအားဖြင့် 12 အကောင်းဆုံးတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်
Luciferians Satanists ထံမှကွဲပြားခြားနားသောမည်သို့
အီတလီအတွက်ကြိယာ "Prendere" Conjugate လုပ်နည်း
Twitter ပေါ်တွင် 20 ရယ်စရာအကောင်းဆုံးနာမည်ကြီးတွေ